Axmed Madoobe oo Nairobi so garay Gen Fartaag oo Adis Abaaba wali ku sugan +Warbixin – Kismaayo24 News Agency
Axmed Madoobe oo Nairobi so garay Gen Fartaag oo Adis Abaaba wali ku sugan +Warbixin
by admin 8th May 2016 055
Wadanka Itobiya waxaa mudo maalmo ah ku wada sugnaan Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Kuxigeenkiisa ay siyaasada ku kala tageen Gen Fartaag.
Labada Masuul ayaa waqtiyo kala duwam so garay Itobiya ayado ugu horeyn u Itobiya so garay Gen Fartaag waxana Boqashada Fartaag ee Adis ay ahayd mid ku timid khilaaf labada masul soo kala dhex galay.
Dowlada Itobiya oo ayadu sameyn muqata ku leh maamulada dhismay ee Somalia ayaa gen fartaag ku casuntay wadanka itobiya bal si lo dhex dhexaadiyo labada masul ee is khilaafay waxana casumadii fartaag ka dib la casumay Axmed Madoobe oo asaguna garay Magaalada Adis Ababa.
Labada Masul ayaa midba midka kala ku edeynaya in u ku fashilmay siyaasada ayado Axmed Madoobe uu Gen Fartaag ku edeyay in uusan Beeshisa sameyn ku dhex lahayn halkan Gen Fartaag u ku edeyay Axmed Madoobe in u hoosta ku haysto Wadado mayal adag iyo ONLF shaqadana laga wadi la yahay.
Isku soo wada duubo Dowlada Itobiya ayaa Labadan Masul ku amartay in ay wada shaqeyaan sona wada dhisaan xukuumad tayo leh oo dadka wax tabanaya ay iska dhex arkaan mana cada sida arinkaasi uu u dhaqan gali doono.
Wariye aad looga yaqiinay Dalka Pakistan oo lagu Dilay Karachi
Wafdi heer sare ah oo ka Socda UN ka iyo Dowlada Somalia oo Cadaado ku wajahan.
Xog hoose:Hubkii ugu badnaa oo Laga Dajiyay Dekadda Magaalada Hobyo, & Ciida hubkaa loo waday.
admin 20th October 2019
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo u dhoofaya Dalka Mareykanka
Ahmed sudani 3rd March 2018
DAAWO. Kornayl Muuse Biixi oo ka hadlay Nooca ay noqon doonto Xukumadiisu..
gurey 13th December 2017